We.com.mm - ဆောင်းရာသီနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ဝက်သားအစပ်နှပ်ချက်နည်း
အခုရာသီဥတုလေးကလည်း ဆောင်းရာသီ အေးအေးလေးကို ဝင်လာပြီဆိုတော့ ပါးစပ်ထဲမှာလည်း ပူပူစပ်စပ်လေးတွေကိုပဲတောင့်တမိမှာပါ။ ဒီတော့ ချက်ရတာလည်းလွယ်ကူပြီးတော်တော်များများကလည်း နှစ်သက်ကြတဲ့ ဝက်သားလေးကိုပဲ အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ ချက်ကြရအောင်နော်။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်နည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်မယ်နော်။
၁. ဝက်သားသုံးထပ်သား ( အနည်းငယ် )
၂. ကြက်သွနီ ( အလုံးကြီး ၁ လုံး )
၃. ကြက်သွန်ဖြူ ( ၆ တက် )
၄. ဂျင်း ( အနည်းငယ် )
၅. တရုတ်ပဲငံပြာရည် ( အနည်းငယ် )
၆. ဆီ ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၇. သကြား ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း )
၈. ငရုပ်ဆီအနှစ် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၉. ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၁၀. ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး ဝက်သားကိုရေပြောင်အောင်ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး ပါးပါးလေးတွေလှီးပါ။
၂. ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း တို့ကို ပါးပါးလေးတွေလှီးထားပါ။
၃. ဒယ်အိုးကို အပူပေးထားပါ။ ဒယ်အိုး ပူလာပြီဆိုရင် ဝက်သားတွေ ထည့်ပြီးလုံးထားပါ။ ပြီးသွားရင် ငရုပ်ဆီအနှစ်၊ ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့်၊ သကြား၊ ငရုပ်ကောင်း၊ တရုတ်ပဲငံပြာရည်၊ ဆီတို့ကို အချိုးကျစွာထည့်ပြီးနာနာလုံးထားပါ။
၄. ဝက်သားလေးတွေအသားကျက်ပြီးနူးလာပြီဆိုရင် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းနုပ်နုပ်စင်းထားတာလေးတွေကို ထည့်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ အရည်သောက်လေးနဲ့စားသုံးချင်ရင် ရေကိုလိုသလောက်ထည့်ပြီး ဆူပွက်သည်အထိချက်ပါ။ ဒါဆိုအရသာရှိရှိနဲ့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။ ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားရင်တော့ တကယ်ကို စားလို့ကောင်းပါတယ်။
လုပ်ရတာအရမ်းလွယ်ကူတဲ့ Strawberry Banana Smoothie ပြုလုပ်နည်း
ပရိုတိန်းဆိုတာ ဘာလဲ ? ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ဆိုတာ ဘာလဲ ?